Naya Bikalpa | भण्डारक हाँसको कथा र आजको एमालेको अवस्था - Naya Bikalpa भण्डारक हाँसको कथा र आजको एमालेको अवस्था - Naya Bikalpa
प्रकाशित मिती: २०७८ असार २, १२: ३१: ३३
१. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउँदा वा नपाउँदा नेपालको राजनीतिमा के तात्विक भिन्नता आउने छ त ? यो प्रश्न अहिले सबैको मनमा उब्जेको छ । अविश्वासको मतमा मतदान र विश्वासको मतमा मतदान गर्ने अवस्था दुवै उस्तै जस्तो लागे पनि अविश्वासको प्रस्तावमा अरुले प्रधानमन्त्री विरुद्धमा टाउको गनेर, आवश्यक संख्या पु¥याएर अविश्वास छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले आफैँ स्वेच्छाले मलाई यो प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ र म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहन पाऊँ भनेर विश्वासको मत लिने भनेको फरक हुँदै हो ।
अविश्वासको लागि आवश्यक मत अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेले व्यवस्थापन गर्ने हो भने विश्वासको मत पाउनका लागि आफैँ प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था गर्ने हो ।
२.प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले ढुक्कका साथ विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव राख्न प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठक बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिजीलाई सिफारिस गर्नुभयो । त्यो सिफारिस गर्दाको बेलासम्ममा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिएको थिएन ।
माओवादी केन्द्र र ओलीजीले नेतृत्व गर्नु भएको एमालेका बिचको तिक्त सम्बन्ध जग जाहेर थियो र पनि किन माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएन भन्ने कुतुहल सबैतिर छँदैथियो । जुनबेलामा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्थ्यो , विधिवत्रुपमा त्यही बेलामा मात्र सरकार अल्पमतमा पथ्र्यो किनभने सरकार बन्ने बेलामा समर्थन गर्ने राजपा र समाजवादी पार्टीले पहिले नै समर्थन फिर्ता लिइसकेका थिए ।
३.प्रधानमन्त्री ओलीप्रति विश्वासको मत संसदले देला नदेला , त्यो अहिले खासै महत्वपूर्ण कुरा नहुन सक्छ तर दुई तिहाईको वहुमतले बनेको सरकारलाई वहुमत पु¥याउनका लागि देखिएको समस्या हेर्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको कुरालाई भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन । अरु त अरु, आफ्नै दल एमालेकै मतको समेत प्रत्याभूत देखिँदैन । अहिले ओली सरकारको लागि विश्वासको मत पाउने आधार भनेको एकीकृत जनता समाजवादी पार्टीका मत हुन् जुन आफैँमा ओली पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । अन्ततः ती मत या त ओली विपक्षमा पर्नेछन् या त्यो दल नफुट्ने शर्तमा तटस्थ रहनेछन् ।
४.एमालेको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालजीहरुको नेतृत्वमा रहेका साँसदहरुलाई कस्तो समस्या देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई मत दिएर जोगाएमा उहाँको निरंकुशता अरु बढी मौलाउने छ किनभने उहाँको अरु एकवर्षका लागि कुर्सी अकण्टक रहनेछ । विश्वासको मत नदिएर तटस्थ बस्दा वा विपक्षमा मत दिँदा दलीय अनुशासनका विरुद्ध हुनेछ जवकि उहाँहरु दलीय अनुशासन र दलको विधि सपार्न भनेर संघर्षरत हुनुहुन्छ ।
विश्वासको मत नपाउँदा पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रुपमा उहाँको दिन लम्बिने छ र अर्को प्रधानमन्त्रीको तत्काल निर्वाचन हुने पनि देखिँदैन । तर नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृतरुपमा जनता समाजवादी पार्टीले एकभएर चाहे भने उनीहरुमध्येबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित त हुनेछ तर एमालेमा देखिएको समस्याले अरु उग्ररुप लिनेछ । त्यसले दलीय परम्परामा विश्वास गर्ने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कुबेलामा अवसान हुनेछ ।
त्यसले कम्युनिस्ट व्यवस्थाप्रतिको भन्दा पनि संसदीय व्यवस्थाप्रति आम जनतामा निराशा पैदा हुने डर देखिएको छ किनभने एमालेले संसदीय व्यवस्थाप्रति आफ्नो विश्वास देखाएको छ ।
५. एमालेका दुवै समूहहरु भाण्डारक हाँसको नियतिमा देखिएका छन् नीतिकथामा झँै । एउटा समुद्रमा दुईमुखे भाण्डारक नामको हाँस बस्थ्यो । त्यो हाँस समुद्रमा स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण गथ्र्यो यत्रतत्र । ती दुई मुख पनि स्वतन्त्ररुपमा आफूलाई सुखी सम्झन्थेँ । एकदिन एउटा मुखले अमृतफल प्राप्त ग¥यो र मिठो फल चाखेर भन्यो—ए अर्कोमुख, मैले त अमृतफल पाएँ , आहा कति मिठो रहेछ ।
अर्कोमुखले भनेछ—बडो मज्जा आउने भयो मिठो फल खान पाइने भयो । तर अमृतफल पाउने मुखले भन्यो —मैले अलिकति खाएँ , धेरै मिठो रहेछ । आखिर हामी एउटै शरीर हौँ र पेटमा त्यही फल नै जाने हो । घरमा बसेकी हाम्री पत्नीका लागि बाँकी फल लैजाने र उसलाई पनि यो मिठो फल चखाउने हो । अर्को मुखले फेरि पनि नेहोरा ग¥यो अलिकति त चाख्न देऊ मलाई पनि ।
तर अमृतफल पाउने मुखले दिएन र एउटै कुरा भनिरह्यो ः हामी एउटै हौँ एउटै पेटमा त्यसको रस गएकै छ । त्यो मिठो अमृतफल नभन्दै उसलाई दिएन र घरमा लगेर पत्नीलाई दियो । पत्नीले पनि साह्रै स्वाद मानेर खाई । यस्तै हुँदा अर्कोमुख अलि निन्याउरो हुँदै थियो । एकदिन त्यो निन्याउरो मुखले समुद्रमा घुम्दाघुम्दै विषफल प्राप्त ग¥यो अनि अर्को मुखलाई भन्यो— हे अमृतफल पाएर पनि मलाई चाख्न नदिने मुख, आज मैले विषफल फेला पारेँ ।
अब म यो फल खान्छु । अनि अमृतफल खाने मुखले हडबडाउँदै भन्यो—ए नखा नखा, त्यो त विषफल हो, त्यसले त हामी मछौँ । नखा, फाल्ने समुद्रमै । तर निराश मुखले भन्यो —म खान्छु परिणाम मलाई पनि थाहा छ र उसले खायो अनि के भयो भनेर सायद यहाँ भनिरहनु पनि नपर्ला ।
६. अहिलेको एमालेको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अमृतफल खाएर मख्ख परेको ओली समूहलाई तह लगाउन , नेपाल—खनाल समूहले विषफल पनि खाने तयारी गरेको देखिन्छ जसले ओलीको वहिर्गमन सम्भव होस् ।
विश्वासको मत दिए पनि कार्बाहीमा परेर निकालिनु छ, फ्लोर क्रस गरे पनि कार्बाहीमा परेर निकालिनु छ अनि राजीनामा दिएमा पनि त्यही सांसद पदबाट गइने हो । यदि साँसद पदबाट राजीनामा दिएर गइयो भने ओलीका लागि जसपाको सबै मत आए पनि प्रधानमन्त्रीको पदबाट ओलीको वहिर्गमन अवश्यंभावी छ । त्यो बेलामा जसपाले पनि ओलीलाई साथ दिने छैन भन्ने अनुमान नेपाल—खनाल पक्षको छ ।
७. उता दुई तिहाईको मत लिएर प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिएका एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि वहुमत पनि आकाशको फल जस्तै भएको छ । जसरी पनि मतको जोगाड गर्नका लागि जे पनि गर्न तयार हुनुभएको देखिन्छ । यदि विश्वासको मत पाए एकवर्षसम्म निष्कण्टक राज्य चलाउने छु, विश्वासको मत पाइएन भने पनि म नै प्रधानमन्त्री हुने हो । अनि उहाँलाई लागेको छ सहजताका समयमा निर्वाचन गराउँला ।
यदि कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनु पर्दा पनि मैले नै प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचन गराउने हो यो संक्रमणकालमा कुनै आन्दोलन पनि सम्भव छैन ।
८. राजनीति सधैँ सरल रेखामा हिँड्दैन । नदेखिने नियतिले राजनीतिलाई डो¥याएको हुन्छ । अहिलेको अव्यवस्थामा एक्लो ओलीलाई मात्र गाली गरेर पुग्दैन । उहाँलाई यो अति महत्वाकांक्षी बनाउने दुई तिहाईको मत दिनका लागि उक्साउने तत्वहरु पनि आजको अवस्थाका लागि उत्तिकै उत्तरदायी हुन् ।
९. हेरौँ भाण्डारक हाँसको नियतिको परिणाम । जे गरे पनि एमाले भन्ने दल अब एक भएर रहने सम्भावना छैन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ । यदि विश्वासको मतमा मतदान नहुँदै ओलीले राजीनामा दिएर नयाँ बाटो खोले भने एमाले एक हुने सम्भावना छ र दोस्रो तहको नेतालाई दुवै समूहको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने अझै सम्भव देखिन्छ तर आफू प्रधानमन्त्री रहिरहन प्रतिनिधि सभा समेतको अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीले आगामी निर्वाचनमा वहुमत ल्याएर सिंहदरबार फेरि फर्कने अति महत्वाकांक्षा पालेर बस्नु भएको छ । त्यही प्रधानमन्त्री छोड्ने हो भने पहिलेको वाचाबमोजिम प्रचण्डलाई नै छोडनु हुन्थ्यो भन्ने विश्लेषकहरु पनि छन् ।
१०. र अन्त्यमा, नेपालको राजनीतिमा देखिने अस्थिरताको अन्त्य होस् भन्ने कामना छ र मुलुकमा दोस्रो संविधानसभाबाट प्राप्त संविधानको समावेशी लोकतन्त्रको प्रतिफल पाउन नेपाली जनता लालायित छन् । कम्तीमा पनि यो विशेष अधिवेशनले नयाँ बाटो कोरोस् र मुलुकलाई स्थिरताको पक्षमा लैजाओस् ।
२०७८ असार २, १२: ३१: ३३